कोरोनाविरुद्धको औषधि सबैभन्दा पहिला नेपाललाई दिने चीनको घोषणा ! – Khabar PatrikaNp
कोरोनाविरुद्धको औषधि सबैभन्दा पहिला नेपाललाई दिने चीनको घोषणा !
August 5, 2020 1009
पछिल्लो समय कोरोना महामारीविरुद्धको औषधी पत्ता लगाउन विश्वरभरका देशहरु लागिपरेका छन् ।
यसैबीच, उत्तरको छिमकेी देश चीनले कोरोनाविरुद्धको खोपको सफल परीक्षण भएको भन्दै धमाधम तयार भइरहेको बताएको छ । नेपाललाई समेत उसले खुसीको खबर पठाएको छ ।
चीनले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सबैभन्दा पहिला नेपाल लगायत छिमेकीलाई सहयोग गर्ने बताएको हो ।
छिमेकी देशहरुलाई सहयोग गर्ने चीनले बताएको छ । चिनियाँ बिदेशमन्त्री वाङ यीले कोरोनासँग जुध्न नेपालसँग पनि निकट सहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।
चीनले कोरोना नियन्त्रण गर्न सफल भएको अनुभव छिमेकी देशहरुलाई बाड्न समेत चाहेको बताए ।
कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा छिमिकीहरुलाई सहयोग गर्ने बचन दिएका वाङ यीले खोप बन्ने बित्तिकै नेपालसहित छिमेकी देशहरुमा आफै पुर्याइदिने बताए ।
चीनले कोभिड १९ को महामारी पछी पहिलो पटक आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा बोल्दै विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल लगायत पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई पनि पहिलो चरणमै कोरोनाको खोप पुर्याउने बताएका थिए ।
पछिल्लो पटक चीनमा कोरोनाका संक्रमित नभेटिएको चिनियाँ संचारमाध्यमहरुले बताएका छन् । केही दिनअघि राजधानी बेइजिङमै कोरोनाका बिरामी भेटिएका थिए ।
चीनले कोरोना संक्रमणलाई ८४ हजारमै नियन्त्रण गरेको थियो । जसमध्ये ७८ हजार ९४४ निको भएर घर फर्किएका थिए भने ४ हजार ६३४ ले ज्यान गुमाएका थिए ।
अहिले चीनमा ४ सय ८२ जनाले उपचार गरिरहेका छन् ।
यसैबीच विश्वभर १ करोड ६८ लाख ८२ हजार चार सय ११ जानमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टी भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्कले देखाएको छ । संक्रमितमध्ये विश्वभरमा हालसम्म ६ लाख ६२ हजार ४१९ ज्यान गुमाएका छन् ।
त्यसैगरी संक्रमितमध्ये करिब करिब १ करोड,४ लाख व्यक्ति कोरोना जितेर घर फर्किएका छन् । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका २१६ देशमा फैलिसकेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिका भएको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको गैरजिम्मेवारीपनकै कारण कोरोना बढेको बताइएको छ । अमेरिकापछि ब्राजिल बढी प्रभावित भएको छ । तेस्रो स्थानमा छिमेकी भारत रहेको छ ।
यता भारतमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरु निकै बढेका । आइतबारसम्म निरन्तर ५० हजारको हाराहारीमा संक्रमित थपिँदै गइरहेकामा सोमबार भने कम संक्रमित भेटिएका थिए । तर बुधबार अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् ।
बुधबार ५२ हजार २६३ जना संक्रमित भएका छन् । मंगलबार ४९ हजार ६३२ जना संक्रमित भएका थिए । सोमबार ४६ हजार ४८४ जनालाई संक्रमण भएको थियो ।
आइतबार ४८ हजार ९३२ जना संक्रमित थपिएका थिए । शनिबार ४८ हजार ४७९ जना, शुक्रबार ४८ हजार ८९२ तथा बिहीबार ४८ हजार ४४६ जना संक्रमित थपिएका थिए ।
अहिलेसम्म भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमित १५ लाख ८४ हजार ३८४ जना पुगेका छन् । मृतक ३५ हजार ३ पुगेका छन् । बुधबार ७७५ जनाको ज्यान गएको छ । मंगलबार ७७० जनाको ज्यान गएको थियो । सोमबार ६३६ तथा आइतबार ७०४ जनाको ज्यान गएको थियो ।
हाल ५ लाख २७ हजार ३५५ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । बुधबार ३२ हजार ८२९ जनालाई निको भएको छ । मंगलबार ३५ हजार ६७१ जनालाई निको भएको थियो ।
यो अहिलेसम्मकै बढी हो । सोमबार ३४ हजार ४४४ जनालाई निको भएको थियो । आइतबार ३१ हजार ५०२ लाई निको भएको थियो । हालसम्म १० लाख २१ हजार ६११ जनालाई निको भइसकेको छ
Prevर्दा-हेर्दै कोब्राको टाउकोमा सुनौलो रंगको (मणी) प्रकाश चʼम्किन थालेपछि नाग देʼवता भन्दै सʼर्पको पूजाआजा गर्ने मानिसको भीड… भिडियो हेर्नुहोस
Nextबिहे गर्छु भन्दै ६ बर्ष सँगै बसेर अन्तिममा ग’र्भवती बनाएर केटा फ’रार: रु’दै युवती आइन मिडियामा
३ करोड लगानीमा छ’क्का पन्जा ४ बन्ने….!
पेट चि’रिएको देखेपछि जलाउन लागिएको शव चिताबाट उठाएर अस्प-ताल पुर्‍याइयो
देशभर सयौको सख्यामा संक्रमित थपिए
BREAKING NEWS : ललितपुर महानगरपालिकाले हटाउन थाल्यो म’दिराका होर्डिङ बोर्ड !
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (31242)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (30513)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (28324)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (25733)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (23541)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (21522)
सोनी हाङ्मा लिम्बुको प्रेमी भनिएका डीकेन लिम्बु आए मिडियामा, गरे सबैलाई चकित पार्ने खुलासा…! भिडियो हेर्नुहोस (15934)
मुस्लिम अरबिक महिलालाई ग’र्लफ्रेन्ड बनाउदा काठमाण्डौमा महल बन्यो… (15330)
अचानक सिल गरियो भर्खरै काठमाडौंका यी ठाउँहरु, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (14054)
आफ्नो श्रीमती भगाउनेको श्रीमती लिएर फरार (13583)
९ लाख ब’लेको ब’त्तिलाई द’र्शन गर्नुहोस र ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस, आफु कसरि ध’नि बन्न सकिन्छ पुरा पढ्नुहोला
धनी बन्ने इच्छा छ ? धर्माशास्त्र भन्छ- जिन्दगीमा गर्दै नगर्नुहोस् यी १० गल्ती
यस्तो मन्दिर जहाँ जे मागेपनि पूरा हुने ठूला केदार मन्दिर ,ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस !!!
खुसीको खबर अमेरिकाको पाठ्यपुस्तकमा लेखियो गौतम बुद्धको जन्मस्थल नेपाल हो सम्मान स्वरुप १ लाईक गरौ।
बुढानिलकण्ठ भगवानको दर्शन गरी, ॐ लेखी भेटी स्वरुप एक सेयर गरि आज मंसिर १७ गते बुधबारको राशिफल पढ्नुहोस् । आज यी राशी लाई मिल्नेछ सफलत।ॐॐॐ❣️